HUBAAL CHANNEL: DAAWO Boqor Bad-madow Oo Jawaab Kulul Ka Bixiyay Hadalkii Boqor Buur-madow, Safiir Baashe Cawil-na Amaan Iyo Xaal Gole Joog ah Iskugu Daray | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM HUBAAL CHANNEL: DAAWO Boqor Bad-madow Oo Jawaab Kulul Ka Bixiyay Hadalkii Boqor Buur-madow, Safiir Baashe Cawil-na Amaan Iyo Xaal Gole Joog ah Iskugu Daray
“Horta Inanka Baashe Cawil af-legaadada yar ee xagayaga uga yimaada xaal baan ka siinayaa, midh baanan leeyahay Safiir Baashe Cawil, oo waxaan leeyahay Baashow Hortaada mooyee xagaaga dambe haba eegin” Boqor Axmed Bad-madow
Hargeysa (Hubaal) Boqor Axmed Maxamed (Bad–madow) ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal dhawaan kasoo yeedhay boqor Cismaan Buur-madow, kaasi oo uu duray beelaha dhexe gaar ahaan beesha Habar Awal. “Buur-madow Habar-jeclo iska daayoo BICIIDO ayaanu metali Karin, Biciido haddaad sii eegtano, BAHO ayaanu metali Karin. “dadka u haysta Buur-madow inuu Cid yahay ama Habar-jeclo-ba yahay Gu’ may jirin. Buur-madow waa Ninkaa iska xoogsatada ah ee iska shaqeysta, maalinba hawshiisu halkay taalo ee loo diro ayuu ku jeestaa, Buur-madow nin Habar-jeclo matalana maaha. Habar-jeclo iska daayoo BICIIDO ayaanu metali Karin, Biciido haddaad sii eegtano, BAHO ayaanu metali Karin. Waxaan xaal ka siinayaa intaan Boqorka u ahay malaha may yar jeclaysan Media-ha hadalo uu ku qoray Buur-madow.
Inankaa Baashe ee aanu tolka nahay Af legaadada yar ee xagayaga ka timaada xaalka baan ka siinayaa, waxaanan ku xaal marin doonaa inankaa Baashe Cawil ee safiirka ah madal loo dhan yahay, weliba khusuusan madal reerkayagu (Sacad Muuse) fadhiyo.” Boqor Axmed Bad-madow.
Waxa kale oo Boqor Bad-madow boggaadiyay horumar balaadhan oo uu sheegay inay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo dalka ka hirgalsay.
HALKAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA OO DHAMAYSTIRAN